१८ वर्षको उमेरमै विधवा भएकी मन्दिपको श्रीमती भन्छिन्, ‘यो काखको छोराले बाबा भन्न पनि पाएन’ (भिडियो हेर्नुस्) – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /Video/१८ वर्षको उमेरमै विधवा भएकी मन्दिपको श्रीमती भन्छिन्, ‘यो काखको छोराले बाबा भन्न पनि पाएन’ (भिडियो हेर्नुस्)
१८ वर्षको उमेरमै विधवा भएकी मन्दिपको श्रीमती भन्छिन्, ‘यो काखको छोराले बाबा भन्न पनि पाएन’ (भिडियो हेर्नुस्)
काठमाडौं । ८ महिनाको छोरा काखमा छ । कलिलो उमेर छ । १८ वर्षको कलिलो उमेरमा श्रीमानलाई उनकै साथीले ह त्या गरिदिए । उनको अगाडी आकास जस्तो जिवन बाँकी छ । यो सानो काखको छोराले बाबा भनेर बोलाउन पनि पाएन । १८ वर्ष उमेर टेकेकी यि युवतीको भविष्य अब के होला ?
घरमा केही साथी उनका श्रीमानलाई बोलाउन आए । राति उनी आएनन् । श्रीमती सु तेकै थिइन् । छिमेकीले ढोका ढकढकाउन आए । एक जना महिला उनलाई ढोकामा बोलाउन आएकी थिइन् । हतार गरेर उठीन् के भयो दिदी ? किन बोलाउनु भयो भनेर सोधिन् । जव उनको दिदीले आफ्ना श्रीमान यो धर्तीमा नभएको कुरा सुनाइन् उनले टेकेको जमिन भा’सियो । आँखा अगाडी अँध्यारो भयो । उनी दौडिएर खोला किनारमा पुगिन् । अवस्था हेर्न सकिने थिएन ।
उनले आफ्ना श्रीमानको अवस्था हेर्न सकिनन् । अहिले पनि त्यो दृष्य आँखा अगाडी घुम्छ । जुन दिन देखि मनदिपले छोडेर गए श्रीमती र उनको आमाको आँखा ओभाएको छैन । उनले राती १२ वजेसम्म श्रीमानलाई फोन गरेकी थिइन् । साँझ ७ वजे साथी घरभन्दा तल बोलाउन आएका थिए ।
श्रीमानले जाने बेलामा म आज साथीहरुको मै बस्छु भोली आउँछु भनेर गएका थिए । साँझ श्रीमानलाई बोलाउन आउँदा ७, ८ जना साथी थिए । एक जना घर नजिक आएर बोलाए उनलाई देँखे तर अरु अलि पर बसेका थिए । उनीहरुलाई भने आफुले नचिनेको बताइन् । श्रीमान साथीले बोलाएर गएपछि फर्केर आउँछन् की भनेर रातभरी ढोका पनि नलगाई कुरीन् । विहान पख निदाएकी थिइन् छिमकी दिदी आएर त्यस्तो खबर दिएको बताइन् ।
अकालमा ज्यान गुमाएका मनदिपको जिवन संधै दुखैदुखमा बित्यो । ११ वर्षको छोरालाई छोडेर पहिलो श्रीमतीले छोडेर गएपछि उनले अर्को विवाह गरे । वुवाले पनि केही वर्ष अघि नै छोडेर गए । बुवाको निधन भएपछि परिवारको सबै आर्थिक भार मनदिपकै काँधमा थियो । ११ वर्षको छोरालाई छोडेर हिडेपछि उनले सहाराको लागि अर्को विवाह गरेका थिए । १६ वर्षको नाबालिक विवाह गरेका मनदिप विवाह भएको २ वर्षमै अस्ताए । १८ वर्षको उमेरमा विधवा बनाउने मनदिपका साथीलाई कडा कारवाहीको माग गरेकी छन् ।
भेरीमा ब’गेका नवराज विकका साथी गोबिन्द शाहीको श’,व सुर्खेतमा भेटियो !
नेपाल मात्र हैन् विश्व नै कोरोना मा’हामा’रीबाट ग्र’सित छ । कोरोनाबाट ब’च्नका लागि नेपालमा केही २ महिना देखि ल’कडा’उन जारी छ । यहीबीच पश्चिम रुकुममा घटेको द’र्दना’क घ’टनाले सबैको मन रु’वाएको छ । आखिर के दो’ष थियो र एकसा ६ जनालाई त्यसरी भेरीमा ब’गा’ईयो । यो प्रश्न आम मानिसको मनमा उब्जिएको छ ।
जिल्लाको चौरजहारीमा भएको घ’टनामा बे’पत्ता भएका ६ जना सबैको श’व फेला परेको छ । जाजरकोट भेरी नगरपालिका–४ का नबराज विक प्रेम विवाहका लागि केटी लिन आएको बेला भएको घ’टनामा ६ जना बे,पत्ता भएका थिए । यसअघि ५ जनाको श’व फेला परेको थियो । शनिबार छैटौँ जनाको पनि श’व फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम पश्चिमका प्रमुख डिएसपी ठकबहादुर केसीले जानकारी दिए ।
बे’पत्ता भएका भेरी नगरपालिका–४ का १९ वर्षीय गोविन्द शाहीको श’व सुर्खेतको मेलकुनामा फेला परेको उनले बताए । श’व फेला परेसँगै अब परीक्षण गरेर आफन्तलाई बुझाइने डिएसपी केसीको भनाइ छ । यसअघि जाजरकोटका भेरी नगरपालिका–४ का २१ वर्षीय नबराज विक, सोही ठाउँका गणेश बुढा, लोकेन्द्र शाही र चौरजहारीका टिकाराम सुनारको श,’व फेला परेको थियो ।
बिराटनगर । मोरङको सुन्दरहरैंचामा लकडाउन प्रभावितलाई राहत वितरणका लागि जाँने क्रममा दुर्घटनामा परेकी नेकपा सुन्दरहरैंचा नगर कमिटि सदस्य अनिता न्यौपाने (रञ्जु) को उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ ।
दुर्घटनामा घाईते भएपछि बिराटनगर स्थित नोबेल शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत न्यौपानेको गएराती मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । सुन्दरहरैंचा–१० त्रिवेणी टोलकी ४० बर्षीया न्यौपाने राहत वितरणका लागि जाने क्रममा बैशाख २७ गते दुर्घटनामा परेकी थिईन् ।
न्यौपाने सवार को.३१ प.३११७ नम्बरको स्कुटरलाई बिराटचौकमा प्रदेश नं.१–०२–००२ ह.८५२३ नम्बरको सिटी सफारीले ठक्कर दिदा उनी गंभीर घाईते भएकी थिईन् । नोबेल अस्पतालमा उपचारका क्रममा २३ दिनपछि उनको मृत्यु भएको हो । दुर्घटना पश्चात सिटी सफारी र चालक बिराटचौकका ३२ बर्षीय खगेन्द्र पौडेललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर जमानीमा छोडेको थियो । तर, घाईते न्यौपानेको मृत्यु भएपछि पुनः चालक पौडेललाई नियन्त्रणमा लिईएको ईलाका प्रहरी कार्यालय बेलबारीका प्रहरी नायव निरीक्षक रमेश प्रधानले जानकारी दिए ।
खुशी को खबर : अब कोरोना* बाट कोही मर्न दिदिन भन्दै जापानले नेपाल`लाई गर्यो एती ठुलो सहयोग ( भीडीयो सहित )
आफ्नै पतिले दागबत्ती दिन पाएनन्, कोरोना भाईरसबाट मृत्यु भएकी साबित्रीको शब यसरी जलाईयो,
कार्टुन भित्र बच्चा भेट्ने आमाको दर्दनाक काहानी, छिमेकिले यस्तो सम्म गर्छन् (भिडियो)
भाग्य न्यौपाने मोटरसाईकलबाट दुर्घटना हेर्नुहोस लाइफ(भिडियो सहित)